Sidee loo kordhin karaa faa'iidada baradhada alaabada 143 rubles 000 hektar? - Joornaalka "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Talobixin takhasus leh
Sidee loo kordhin karaa faa'iidada baradhada alaabada 143 rubles 000 hektar?
Ekaterina Kudashkina, Musharaxa Sayniska Beeraha
Khubarada ayaa baradhada ugu yeera mid ka mid ah dalagyada ugu faa'iidada badan. Xilliga 2021, faa'iidada beerashada baradhada ayaa gaartay heer aad u sarreeya sababtoo ah kor u kaca qiimaha suuqa ee badeecadaha. Laakiin qof kastaa ma awoodi karo goosashada dammaanadda ah ee baradhada tayada sare leh: dalagga wuxuu u baahan yahay maalgelinta kheyraad badan, oo ay ku jiraan isticmaalka diyaargarowga qaaliga ah ee wax ku oolka ah ee quudinta iyo ilaalinta inta lagu jiro xilliga koritaanka oo dhan. Sidee loo caddeeyey kharashyadan?
2020-2021 kii. sanadka aanu ku jirno shirkada Agroliga LLC waxay sameeyeen dhowr daraasadood oo gudaha ah waxayna horumariyeen qorshayaal tijaabo ah si loo hubiyo wax-soo-saarka baradhada oo si buuxda ugu soo laabtay maalgashiga.
Maqaalkan, waxaan ku falanqeyn doonaa baahida iyo natiijada hordhaca ah ee nidaamka quudinta baradhada baradhada Arizona iyadoo la adeegsanayo diyaarinta wax soo saarka Isbaanishka ee shirkadda Agritecno.
Sannaddii 2021 barnaamijka nafaqeynta baradhada ayaa la fuliyay iyadoo lagu saleynayo K (F) X Yuzefov Nikolay Nikolaevich (Gobolka Rostov, degmada Semikarakorsk). Shirkaddu waxay ku jirtaa TOP-10 beeraha baradhada ugu weyn ee Ruushka. Imaanshaha halkan, waxaad dareemeysaa in beertani ay saddex tallaabo ka horreyso kuwa kale oo badan: kooxdu waxay u shaqeysaa si daacad ah, tilmaamayaasha dhaqamada oo dhan ayaa sarreeya. Milkiilaha shirkadda, Nikolai Nikolaevich Yuzefov, ayaa na siiyay goob tijaabo ah oo loogu talagalay cilmi-baarista wadajirka ah. Waxa uu leeyahay boos la yaab leh: "Ma aha inta uu kor u qaaday, laakiin inta uu quudiyey."
Hawsha ugu weyni waxay ahayd in la helo wax-soo-saar sare oo ah baradho tayo leh oo leh soo-celin wanaagsan oo maalgashi iyo faa'iido saafi ah oo dheeraad ah.
Tijaabooyinka garoonka ee isticmaalka diyaarinta Agritecno ayaa lagu fuliyay dhul dhan 40 hektar, baradhada Arizona ayaa lagu beeray waraabka dusha sare. Qamadiga Jiilaalka ayaa ahaa hormoodka goobtan. Xilliga dayrta, 600 kg/hektar diammofoska ah ayaa la dalbaday beerista, oo ay ku xigto samaynta qolofka. Guga, ka hor intaan la beerin, diammophoska 200 kg / ha ayaa la soo bandhigay, ka hor inta aan la kicin - amooniyam amooniyam 150 kg / ha.
Nashqada waayo-aragnimada goobta waxa lagu sheegay shaxda No. 1
Daawaynta digriiga, marka lagu daro sunta cayayaanka iyo fungicides ee ay isticmaasho beertu, diyaarinta Tekamin Rais Plus iyo Controlfit Cu ayaa la isticmaalay.
Faa'iidada daroogadaTekamin Rais» baradhada waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in inta lagu jiro daawaynta hore ee beeritaanka ay dardargeliso samaynta nidaamka xididka tuber, kaas oo bixiya nafaqada dhirta madax-bannaan.
Daawo"Xakamaynta Cu» (Naxaas) waxaa loogu talagalay in lagu kordhiyo caabbinta dhirta cudurada fangas iyo jeermiska bakteeriyada, taas oo si gaar ah muhiim u ah marxaladda biqilka tuber. Marka lagu daro ficilka fungicidal, naxaasku wuxuu kiciyaa hababka photosynthesis ee dhirta dhirta. Gaar ahaan "Controlfit Cu" waa in walaxda firfircoon ay u gudubto xylem iyo phloem, si nidaamsan u ilaalinaysa geedka (ie, gluconate copper waa qaabka kaliya ee jiritaanka naxaasta gudaha geedka). Bacrimintani wax analoog ah kuma laha dalka Ruushka 100% waa mid deegaan ahaan u wanaagsan.
"xakamaynta Cu» Waxaa sidoo kale loo isticmaalay daaweyn dheeraad ah inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, qiyaasta ayaa kala duwan tahay iyadoo ku xiran marxaladda horumarinta dhirta: dhaymada digriiga iyo xilliga ubaxa ka dib, 1 l / ha ayaa lagu dabaqay, iyo inta lagu jiro gaysashada ballaaran, 2 l / ha. Waxaan ogsoonahay in marxaladda gaysashada mass ay dhacday waqtigii ay sii xumaanaysay xaaladaha cimilada ee gobolkeena - waxaa si weyn u da'ay roobka, iyo dushooda baradhada ayaa aad u nugul sababtoo ah waterlogging.
Faa'iido kale oo muhiim ah oo daroogada ahXakamaynta Cu» - waafaqsanaanta fungicides iyo cayayaanka. Beeraley badan ayaa ka baqaya inay ku daraan naxaasta daaweynta tuberka iyo buufinta dhirta. Iyada oo ku saleysan waayo-aragnimada shakhsi ahaaneed, waxaan rabaa in aan xoogga saaro in shaqada la dhammeeyo ka dib, midna qaybta xalka ama taangiga buufiyeha ah ma dhicin. Waxaan diyaarintan ka shaqaynaynay baradhada muddo laba sano ah hadda, mar walbana way xasilloon tahay. Sirtu waa sahlan tahay - qaabaynta wanaagsan ee daawada iyo habka saxda ah marka la isku daro - "Xakamaynta Cu» ku dar biyaha la diyaariyey ka hor SZR, maadaama ay tahay diyaarinta organic.
Nidaamka ugu muhiimsan, ka dib daaweynta digriiga, marka lagu daro daaweynta cayayaanka, bacriminta soo socota ayaa lagu daray nafaqada foliar ee baradhada:
1. "Tekamin Max Plus» - waxaa loo adeegsaday ku dhawaad ​​dhammaan wejiyada horumarinta baradhada, kaliya qiyaasta ayaa isbedelay. Waxaa lagu dabaqay jajab 6 jeer 0,5 l/ha, wadar ahaan 3 l/ha inta lagu jiro xilliga koritaanka. Daawada waxaa loo isticmaalaa in lagu dhaqaajiyo korriinka iyo horumarinta dhaqanka, si ka hortag ah ayaa loo ilaaliyaa (haddii walwalku dhaco ka dib daaweynta daroogada. "Tekamin Max" waxayna dib u soo celisaa dhirta ka dib xaalado walaac leh (haddii daaweyntu ay ahayd xaalad walaac leh ka dib). "Tecamin Max Plus" ma aha oo kaliya isku-darka qaybaha kale ee muhiimka ah ee dhaymada foliar, kor u qaadida saameyntooda, laakiin sidoo kale waxay ku kordhisaa isku dhafka nafaqada leh asiidhyada amino ee lagama maarmaanka u ah dhirta, iyo sidoo kale waxay siisaa geedka qaadista nafaqooyinka macdanta. Saamaynta muuqaalka ee codsiga "Tecamin Max Plus" ayaa si sax ah loogu muujiyay koritaanka qaybta hawada ee geedka, korodhka xoojinta midabka caleemaha iyo muuqaalka caafimaad ee baadiyaha. Natiijada guud ee hagaajinta dusha caleentu waa samaynta wax-soo-saar weyn.
Daroogadu si buuxda bay u fiican tahay deegaanka sababtoo ah asalka dhirta. Maaddada kordhay ee walxaha organic (60%) iyo L-amino acids oo bilaash ah oo asal ahaan ka soo jeeda khudradda (12%) waxay kor u qaadaysaa horumarinta dhirta, waxay kordhisaa koritaanka digriiga waxayna wanaajisaa tayadooda, taas oo ugu dambeyntii suurtogal ka dhigaysa in la helo jajab baradho ah oo isku mid ah. .
2. "Teknokel Amino B (boron) Plus" - marxaladda gaysashada - bilowga ubaxa 1 l / ha ee koritaanka caleemaha iyo nidaamka xididka, ka hortagga qolofta, iyo sidoo kale cunto dheellitiran, tan iyo yaraanteedu waxay yaraynaysaa nuugista nitrogen iyo calcium. Waxaan wax ku darsannay"Teknokel Amino B" waa wakhtigan muhiimka ah ee dhirta baradhada, maadaama boronku yahay bacrimin iyo hab ka hortag ah phytophthora.
Si gooni ah, waxaan iftiimin doonaa: Thanks to the patented technology FASTB©️ Unugyada organic ee daawada "Teknokel Amino Bor Plus" waxay ka hortagtaa ku-xidhnaanta boron ee xuubka unugyada waxayna ka dhigtaa mid guurguura, ka hortagga boron-yarida dheeraadka ah.
3. "Teknokel Amino Sa (kalsiyum) Plus - jajab ahaan 1 l / ha laga bilaabo dhammaadka ubaxa ilaa bartamaha xilliga koritaanka tuber, si kor loogu qaado tayada diirka iyo ilaalinta tayada, sababtoo ah goosashada ayaa la qorsheeyay in la dhigo. Faa'iidada"Teknokel Amino Sa" waa sida saxda ah in ay ku jirto boron. Boron waxay ku lug leedahay dhaqdhaqaaqa kalsiyum ee dhirta; kalsiyum lafteedu ma firfircoon tahay.
4. "Teknokel Amino Mix (isku darka) Plus" - 1 l / ha si loo baabi'iyo yaraanta nafaqeeyayaalka yar yar iyo kordhinta difaaca dhirta inta lagu jiro xilliga koritaanka tuber. Tani saxiyaha yaraanta nafaqeeyayaalka yar oo dhamaystiran oo leh asiidhyada amino ee bilaashka ah ee asalka dhirta waxay ka caawisaa ka hortagga gaajada qarsoon ee dhirta ee marxaladda dhalmada, waxay u shaqeysaa nidaamka enzyme waxayna kicisaa koritaanka dhirta iyo horumarinta xubnaha dhalmada.
5. "Xakamaynta RK" (potassium fosfooraska) - 1 l / ha si loo hagaajiyo tayada alaabta iyo kordhinta caabbinta cudurada fangas. Waa il degdeg ah oo laga helo nafaqeynta fosfooraska-potassium, waxa ay ka kooban tahay 30% fosfooraska iyo 20% potassium.
Waayo-aragnimadayadu waxay kaloo ahayd mid ka duwan inaan isticmaalnay diyaarinta organic "xanaaq badan Dheeraad ah" (5 l / ha guud ahaan xilliga koritaanka, jajab) - caleemaha 10-15 cm iyo 2 toddobaad ka dib.
Sannad ka hor, majaladda Nidaamka Baradhada ee No. 1/2021, waxaan bixiyay tusaale waxtarkeeda. Dhibaatada milixdu waxay ku habboon tahay dhammaan beeraha leh waraabka, markaa waxaan ku talinayaa in bacrimintan loo isticmaalo wareegga. Waa maxay xoogga "Agriful"? Waxaa loo isticmaalaa bacriminta sida biostimulator xidid iyo ciidda biofeed. "Agriful" ma ogola in carradu noqoto saline waxayna yaraynaysaa dhaqdhaqaaqa korantada ee agagaarka aagga xididka.
Maxaad si gaar ah isha ugu haysaaxanaaqsan"? Betaines ee ka kooban qaybteeda waxay ka caawisaa nidaaminta cadaadiska osmotic ee gudaha dhirta, taas oo hagaajinaysa helitaanka nafaqooyinka. "xanaaqsan" waxay kor u qaadaa nuugista macronutrients, tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay wajahada kor u kaca qiimaha iyo sahayda bacriminta macdanta oo aan xasilloonayn.
Asiidhyada Fulvic iyo walxaha organic waxay ka shaqeeyaan kordhinta wax soo saarka dhirta. "Agriful" waxaa loo isticmaali karaa waraabinta faleebada iyo rusheynta labadaba. Waxaan codsanay Agriful leh naaso-dhicis waaweyn (loogu talagalay UAN) laba jeer 2,5 l/ha oo leh heerka qulqulka dareeraha shaqeynaya ee 300 l/ha ka dibna shid mishiinka waraabinta. Sidoo kale hab xiiso leh oo waxtar leh - ma jirin wax gubasho ah, waa arrin dabiici ah oo saafi ah. Dhirta ayaa si fiican u qaatay quudkan. Laga soo bilaabo indho-indheynta - qaab-dhismeedka ciidda ayaa soo fiicnaaday, dhulku wuxuu noqday mid dabacsan.
Maadaama baradhadu ay u baahan tahay daaweyn badan xilli kasta, tayada buufinta ayaa ah muhiimad aasaasi ah. Inta badan, beeralayda waxay la kulmaan dhibaatada xakamaynta pH iyo adkaanta biyaha.
Biyaha adag waxay saameyn xun ku leeyihiin:
a.i. hufnaan sunta cayayaanka (gaar ahaan, fungicides - tani waa mid ka mid ah kharashka ugu weyn ee baradhada): sababtoo ah biyaha adag, waxay ku xiran yihiin hydrolysis alkaline;
buufinta buufinta: waxay xiraan oo ay gaabiyaan habka shaqada.
Qaboojiyaha ayaa loo isticmaalaa in lagu xalliyo dhibaatooyinkan.Teknofit pH". Waxay isku xidhaa milixyada adkaanta si aanay u keenin hydrolysis alkaline. "Teknofit pH" isku mar acidifies alkaline iyo jilcisaa biyaha adag, yaraynaysaa xiisadda dusha sare ee biyaha, hagaajinaysaa dhexgalka ee xal shaqada galay xaashida iyo baabi'iyo xumbo.
Tilmaamaha midabku wuxuu midabeeyaa biyaha marka heerka aysidhka isbeddelo, taas oo sahlaysa in la go'aamiyo qiyaasta loo baahan yahay iyada oo aan la isticmaalin qalab gaar ah.
Waxaan ku nuuxnuuxsan doonaa: kiis kasta oo gaar ah oo loo isticmaalo sunta cayayaanka gaar ah ee diyaarinta xalka shaqada, waxaa jiri kara waxyaabo qarsoodi ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u akhrido calaamadda daroogo kasta oo aad ka shaqeyso si loo hagaajiyo tayada biyaha. Dibadda, waxaa horayba u jiray dhaqankan oo kale - pH-ga ugu fiican ee xalka shaqada ayaa lagu qorayaa gasacadaha. Waxaan rajeyneynaa in soo saarayaasha Ruushka ay sidoo kale imaan doonaan tan ugu dhakhsaha badan.
Ogosto 24, 2021, oo ay weheliyaan wakiilada beerta, waxaanu samaynay qodista kontoroolka laga soo bilaabo 1,5 mitir toosan, oo miisaamay oo la dhigay digriiga (Jaantus. 1).
Maxaan aragnay? Dhalin weyn oo jajab dhexdhexaad ah oo baradho ah oo ku jira goobta tijaabada ah. Ka hor inta aan la goosan laba bilood - digriiga ayaa sii kordhin doona miisaan dheeraad ah.
Bariis 1. 24.08.2021. Wax-soosaarka bayoolojiga ee baradhada, miisaanka digriiga laga bilaabo 1,5 m: waayo-aragnimo - 10,30 kg (bidix); xakamaynta - 7,75 kg (midig)
Nadiifinta ayaa la sameeyay Oktoobar 18-23, 2021.
Iyada oo ku saleysan natiijooyinka goosashada dhulalka tijaabada iyo xakamaynta, waa in la ogaadaa in Thanks to barnaamijka nafaqeynta cusub, waxaan awoodnay inaan badbaadino 4,9 tan oo dheeri ah 1 hektar oo beerta ah. Wax-soo-saarka baradhada ee goobta tijaabada ah wuxuu ahaa 70,1 t / ha, laga bilaabo goobta xakamaynta - 65,2 t / ha (Shaxda No. 2).
Shaxda 2. Wax-soo-saarka baradhada
Aagga la nadiifiyey, ha Tirada alaabta la goostay, t Wax soo saar, t / ha
Xakamaynta (20 ha) 5,27 343,7 65,2
Khibrad (40 ha) 8,25 578,4 70,1
Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo mulkiilaha ganacsiga Nikolai Nikolaevich Yuzefov iyo dhammaan shaqaalaha beerta si daacadnimo iyo xilkasnimo leh loogu wajaho ganacsiga wadajirka ah. Sergey Aleksevich Voronov, Agaasimaha Fulinta; Petr Yurievich Khmyz, horjooge-baradhada beeralayda; Evgeny Vladimirovich Ustinov, agronomist, waa xirfadlayaal dhab ah oo ku jira beertooda!
Dakhliga dheeriga ah (net, marka laga reebo maalgashiga) wakhtiga goosashada dhamaadka Oktoobar 2021 ayaa gaadhay 143 rubles / hektar, iyada oo la maalgelinayo diyaarinta 300 rubles / ha iyo qiimaha baradhada 13 rubles / kg.
Вывод: Barnaamijka nafaqeynta ee la soo jeediyay ayaa suurtageliyay in la kordhiyo awoodda dhirta, iyadoo la siinayo fursadda lagu helo faa'iidooyin xagga wax soo saarka iyo dhaqaalaha labadaba. Tani waa bar cusub oo dammaanad ah oo kobaca faa'iidada shirkaddaada sidoo kale.
Tags: "Agroliga"KFH Yuzefova N.N.
ShareShare45Share32Si aad u soo diri